Yerusalem Sɛe, Adiyifo Asefo | So Wunim?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Xhosa Zulu
So Kristofo guan fii Yudea ansa na atamfo resɛe Yerusalem afe 70 Y.B.?
“Sɛ muhu sɛ asraafodɔm atwa Yerusalem ho ahyia a, ɛnde munhu sɛ n’amamfoyɛ abɛn. Afei momma wɔn a wɔwɔ Yudea mfi ase nguan nkɔ mmepɔw so, na momma wɔn a wɔwɔ kurow no mu no mfi mu nkɔ, na mommma wɔn a wɔwɔ nkuraase no mmma mu.” (Luka 21:20, 21) Yesu de Yerusalem a ɛbɛsɛe no ho akwankyerɛ yi maa n’asuafo no. Adanse wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ asuafo no tiee Yesu kɔkɔbɔ yi anaa?
Yesu wui akyi mfe pii no, Roma sraani panyin Cestius Gallus dii n’asraafo anim kɔɔ Palestina sɛ wɔne atuatewfo a wɔwɔ hɔ no rekɔko. Yudani abakɔsɛm kyerɛwfo Josephus a ɔtenaa ase saa bere no dii adanse sɛ ɛyɛ ampa. Roma asraafodɔm no twaa Yerusalem kurow no ho hyiae, na wɔfaa kurow no wiei koraa ne sa. Nanso mpofirim ara Gallus maa asraafo no fii Yerusalem. Asɔre ho abakɔsɛm kyerɛwfo Eusebius ka sɛ Kristofo a wɔwɔ Yudea no nyaa hokwan guan kɔɔ Pella, kurow bi a na ɛda mmepɔw so wɔ Dekapolis.
Afei afe 70 Y.B. no, Roma asraafo foforo a Ɔsahene Titus di wɔn anim san betwaa Yudafo ahenkurow no ho hyiae. Saa bere yi de, asraafo no yɛɛ adwuma a Gallus anyɛ no; wɔsɛee kurow no pasaa. Wɔkaa nnipa mpempem pii hyeem wɔ Yerusalem ma wowuwui.
Henanom ne “adiyifo asefo no”?
Adiyifo a wɔtenaa ase te sɛ Samuel, Elia ne Elisa ho asɛm a ɛwɔ Bible mu no ka “adiyifo asefo” bi ho asɛm. Sɛ yɛde bere a Elisa repaw Yehu sɛ Israel hene no bɛyɛ nhwɛso a, ɔsomaa “adiyifo asefo no biako” sɛ ɔnkɔsra no ngo.​—2 Ahene 9:1-4.
Nhomanimfo gye di sɛ adiyifo asefo no nyɛ adiyifo mma ankasa, na mmom wɔyɛ nnipa a adiyifo kyerɛkyerɛɛ wɔn anaa wɔne adiyifo yɛɛ adwuma. Nhoma bi (a wɔfrɛ no Journal of Biblical Literature) ka sɛ, ná adiyifo asefo no yɛ nkurɔfo a wɔde “wɔn ho nyinaa maa Yaweh [Yehowa] som, na wɔne adiyifo no nantewee . . . te sɛ wɔn papa wɔ Onyankopɔn som mu.” (2 Ahene 2:12) Bere a Elisa rekɔsra Yehu ngo no, Bible kaa nea ɔne Elisa nam no ho asɛm sɛ ɔyɛ “odiyifo no somfo.”​—2 Ahene 9:4.
“Adiyifo asefo no,” yetumi hu sɛ na wɔyɛ wɔn ho awiɛmfoɔ. Wɔka adiyifo asefo bi a wɔtenaa ase Elisa bere so ho asɛm sɛ, wɔn ankasa bobɔɔ dan bi tenaa mu, na akuma a na wɔde reyɛ adwuma no mpo, wɔkɔsrɛe. (2 Ahene 6:1-5) Wɔka okunafo bi ho asɛm sɛ na ɔyɛ “adiyifo asefo no biako” yere; ɛno kyerɛ sɛ na adiyifo asefo no bi yɛ awarefo. (2 Ahene 4:1) Bible mu asɛm bi kyerɛ sɛ Israelfo no kyɛɛ adiyifo asefo no aduan, na ɛno ma yehu sɛ na Israelfo anokwafo ani gye adiyifo asefo no ho.​—2 Ahene 4:38, 42.
So Wunim?—October 2012